Muqdisho Oo Saaka Gashay Jawi Cusub Iyo Isbaarooyinkii Oo Laga Qaaday | Codka Dalka	Wednesday, June 19th, 2013	Home
Muqdisho Oo Saaka Gashay Jawi Cusub Iyo Isbaarooyinkii Oo Laga Qaaday
Muqdisho:-Waxaa maanta Malagaalada Muqdisho laga dareemayaa jawi cusub ay farxadi ku dheehan tahay, kadib markii Ciidamada Xooga Soomaaliyeed ay qaadeen jidgooyooyin farabadan badan oo ciidamo ka tirsan dowladda iyo Maleeshiyo beeleda kale uyaalay gudaha magaalada Muqdisho,kuwaaso oo dhibaatooyin xoogan ku haayay gaadiidka iyo dadka Shacabka ah.
Jidgooyooyonka laqaaday waxaa ka mid ahaa 4 Isbaaro oo kooxo hubaysan u taalay degmada Wadajir ee gobolka banaadir,kadib howlgalo shalay ilaa saaka laga waday deegaanadaasi.
Sidoo kale Ciidmada xooga waxeey qaadeen Isbaarooyin kale oo yaalay duleedka Magalaada Muqdisho ,yadoo gaadiidka dadweynaha ay saaka jawi farxad leh ku marayaan goobaha laga qaaday Isbaarooyinkaasi.
Dhinaca kale Jan. Cali Caraaye Cosoble Afhayeenka ciidamada Xooga Dowladda Soomaaliyeed ahna taliyaha howlgelinta ciidamada ayaa sheegay in howlgalo xooogan oo ay ka sameeyeen magaalada Marka ay ku qaadeen ilaa dhowr isabaaro taaso ay dhigteen kooxo hubeysan oo iskood isu abaabulay .
Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Prof.Xasan Sh.Maxamuud ayaa todobadakaan Laamaha Amaanka amar ku siiyay in Magaalada Muqdisho laga nadiifinayo Isbaarooyinka iyo weliba Kooxaha falalaka amaan darada ah ka gaysanayo guud ahaan goobaha ay ka taliso Dowladda Soomaaliya